Mexico Tourism Inorwadziswa neUS Isingakoshe Zvifambiso Zvekufamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mexico Kuputsa Nhau » Mexico Tourism Inorwadziswa neUS Isingakoshe Zvifambiso Zvekufamba
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mexico yekushanyirwa yakakuvara neUS isingakoshe mafambiro ekudzivirira
Ipo Hurumende yeMexico iri kubvumidza kufamba kupinda munyika, zvirambidzo pamafambiro ari kubuda zviri kushandiswa neUS.
Mexico inogona kunzwa kurasikirwa kwevafambi veUS sezvo COVID-19 zvirambidzo zvichiramba
Muna 2020, iyo US yakashandisa zvakanyanya pakufamba kwekubuda uye avhareji kushandisa pamunhu wese anosvika madhora mazana matatu nemakumi mashanu nemashanu.
Canada ndiyo yechipiri yakashandisa mari pamusika kuMexico iine $ 1,576 pamunhu anogara.
Colombia ndiyo misika yechitatu yepamusoro yekushandisa mari ine $ 1,286 pamunhu wese anogara.
Isiri-yakakosha kufamba kuyambuka muganho wenyika pakati peUS neMexico inoramba ichirambidzwa Mwedzi gumi nemanomwe kubva pakutanga kwechirwere che COVID-17 uye izvi zvinogona kuve nazvo kukanganisa kunokanganisa nokuti Mexico indasitiri yekushanya.
Chirevo chazvino chinoratidza kuti mu2020, iyo US akashandisa zvakanyanya pakufamba kwekubuda uye avhareji kushandisa pamunhu mugari anosvika madhora mazana matatu nemakumi mashanu nemashanu. Kanadha yaive yechipiri yepamusoro yekushandisa mari musika ne $ 1,576, ichiteverwa neColombia ne $ 1,286.
Ipo Hurumende yeMexico iri kubvumidza kufamba kupinda munyika, zvirambidzo pamafambiro ari kubuda zviri kushandiswa neUS. Sezvo US iri musika wepamusorosoro wemari inoshandiswa nevashanyi, zvakanyanya pamberi pemamwe misika yakakosha senge Argentina, Colombia neUK, indasitiri yekushanya yeMexico ichanzwa kurambidzwa kwekufamba kusiri-kukosha kubva kuUS.
Maererano neongororo ichangobva kuitwa, vafambi vanoda kuenda kure-kure, uko Mexico inogona kuzendamira pairi. Ongororo iyi yakawana kuti pavanhu 1,442 37 vakabvunzwa pasi rose, 19% vakati vakazvipira kutora rwendo rwekunze kune imwe nyika. Munguva pfupi, iyo indasitiri yekushanya yeMexico inogona kuzendamira pamusika wezororo wekutakura, yakanangana nevanoponesa denda vachitsvaga 'bhaketi rondedzero', post-COVID-XNUMX rwendo.
Nekudaro, indasitiri yekushanya inogona kuramba ichinetseka kubhadhara kurasikirwa kwemufambi weUS anoshandisa mari zhinji. Muna 2020, 83% yevose vakasvika kuMexico vaibva kuUS, vachiratidza kuvimba kwenyika iyi pamusika unobuda weUS.
Kunyangwe paine zvirambidzo zvazvino, Mexico inogona kusangana nekushanya kushanyira shamwari nehama (VFR) kufamba kubva kuUS kana zvabvumidzwa zvizere, sezvo ichi chiri chikuru chinokurudzira kufamba pakati penyika mbiri. Vafambi vanogona, zvakadaro, vanowana kukwira mumhepo fares nekuda kwekukurumidza kuwedzera kudiwa. Nekudaro, chishuwo chekuona vadikani mushure menguva yakareba zvichakurudzira vafambi kubhadhara mitengo yakakwira iyi, zvichibatsira nendege.